I-Stellar (i-XLM / USD) Ixabiso ligxotha ukusuka kwi-$ 0.30 kwiNqanaba leNkxaso
STELLAR Uhlalutyo lweXabiso - Disemba 01
Ukunyuka koxinzelelo lomthengi kunokwaphula inqanaba lokumelana ne-$ 0.35 enokunyusa ixabiso kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.42 kunye ne-$ 0.48. Kwimeko apho iibhere ziphazamisa ukuhamba kwe-bullish ngokukhusela i-$ 0.35, ngoko ke, ixabiso lingaqhubeka linciphisa ukuya kumanqanaba enkxaso kwi-$ 0.30, i-$ 0.24 kunye ne-$ 0.22.
Amanqanaba okumelana: $ 0.35, $ 0.42, $ 0.48
Amanqanaba enkxaso: $ 0.30, $ 0.24, $ 0.22
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar ihlala iphantsi kolawulo lweebhere. Le meko yaqala ngoNovemba 10 xa iinkunzi zenkomo zityhala ixabiso ukuvavanya izinga lokumelana ne-$ 0.42. Inqanaba lokuchasana elikhankanyiweyo likhuselwe ngamabhere kunye nokwakheka kwekhandlela elinamandla ngaphakathi kwebha. Ukuhla kwexabiso kunye ne-$ 0.35 inqanaba lokuxhasa lingene phantsi kwaye inqanaba lokuxhasa i-$ 0.30 livavanywa. Okwangoku, ixabiso lihlehla.
Itshathi yosuku lwe-XLMUSD, nge-01 kaDisemba
Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo lunokwenyuka kwaye ixabiso linganyuka ngokufanelekileyo ukuya emantla. Ixabiso lirhweba phakathi kwamaxesha angama-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA. Ukunyuka koxinzelelo lomthengi kunokwaphula inqanaba lokumelana ne-$ 0.35 enokunyusa ixabiso kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.42 kunye ne-$ 0.48. Kwimeko apho iibhere ziphazamisa ukuhamba kwe-bullish ngokukhusela i-$ 0.35, ngoko ke, ixabiso lingaqhubeka linciphisa ukuya kumanqanaba enkxaso kwi-$ 0.30, i-$ 0.24 kunye ne-$ 0.22. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likwinqanaba le-50 lokugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ze-4. Kubonakala ngathi i-bearish momentum iba buthathaka njengoko ixabiso ligxotha kwinqanaba lenkxaso ye-0.30 yeedola. Ixabiso liye lavavanya inqanaba lenkxaso ye-$ 0.30 kabini kwaye ayikwazanga ukuphula inqanaba elikhankanyiweyo. Ingqekembe iyanda ngaphezu kweeEMA ezimbini.
Itshathi ye-XLMUSD yeeyure ezi-4, nge-01 kaDisemba
I-Stellar ithengisa ngaphezu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kuqhagamshelwano olusondeleyo olubonisa uxinzelelo lomthengi luyanda. I-Relative Strength Index amaxesha i-14 ikwimigangatho ye-60 kunye nomgca wesignali obonisa umqondiso wokuthenga.
I-Stellar (i-XLM/USD) Ixabiso: UkuNcitshiswa okuPhambili Kucetywayo njengokuNyuswa koxinzelelo lwabathengisi
STELLAR Uhlalutyo lweXabiso - Novemba 24
Ukunyuka koxinzelelo lwabathengisi kunokuqhekeza inqanaba lenkxaso ye-$ 0.30 enokunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 0.24 kunye ne-$ 0.22. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziphazamisa ukuhamba kwe-bearish ngokukhusela i-$ 0.30, ngoko ke, ixabiso linganyuka libhekiselele kumanqanaba okumelana ne-$ 0.35, i-$ 0.41 kunye ne-$ 0.48.
Amanqanaba okuchasa: $ 0.35, $ ​​0.41 $ 0.48
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar ilandele ukubikezela kwethu kweveki yokugqibela; inqanaba lenkxaso ye-$ 0.35 yaphulwa phantsi kwaye yavavanya inqanaba lokuxhasa i-$ 0.30. Kubonakala ngathi iinkunzi zenkomo zizama ukukhusela inqanaba lenkxaso ye-0.30 yeedola kwaye yingakho iikhandlela zemihla ngemihla ezinomsila zisenziwe. Kukho ukuthambekela kokuncitshiswa kwexabiso ngakumbi ukuba nje iibhere zigcina uxinzelelo lwazo.
XLMUSD Itshathi yosuku, ngoNovemba 24
Uxinzelelo lweebhere lunokwenyuka kwaye ixabiso linokuhla ngokufanelekileyo ukuya emazantsi. Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ukunyuka koxinzelelo lwabathengisi kunokuqhekeza inqanaba lenkxaso ye-$ 0.30 enokunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 0.24 kunye ne-$ 0.22. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziphazamisa ukuhamba kwe-bearish ngokukhusela i-$ 0.30, ngoko ke, ixabiso linganyuka libhekiselele kumanqanaba okumelana ne-$ 0.35, i-$ 0.41 kunye ne-$ 0.48. Ixesha lesalathiso samandla anxulumeneyo i-14 ikwinqanaba le-40 lokugoba phantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar ikwi-bearish movement kwi-chart yeeyure ze-4. Ingqekembe igcina indawo yayo phantsi kolawulo lweebhere kwiveki ephelileyo kwitshathi yeeyure ze-4. Iinkunzi zeenkomo zazama ukutyhala ixabiso ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-0.34 yeedola kodwa uxinzelelo lweebhere lunqoba iinkunzi zeenkomo. Uxinzelelo lwe-bearish luyanda kwaye inqanaba lenkxaso ye-0.35 yeedola lingene phantsi.
Itshathi ye-XLMUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 24
Nangona kunjalo, i-Stellar ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ekunxibelelaneni okusondeleyo okubonisa uxinzelelo lwabathengisi luyanda. I-Relative Strength Index amaxesha i-14 ikwimigangatho ye-50 kunye nomgca wesignali okhomba phantsi obonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar (XLM/USD) Ixabiso lichitha i-$ 0.35 yeNqanaba, iiBhere ziPhambili
Uxinzelelo lweebhere luyenyuka kwaye ixabiso liyehla
STELLAR Uhlalutyo lweXabiso - Novemba 17
Ukuchithwa kwe-$ 0.35 kwinqanaba lenkxaso yeebhere kunokunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 0.35 enokwandisa kwi-0.24 yenkxaso yezinga. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziphazamisa ukuhamba kwe-bearish, ngoko ke, ixabiso lingajongana namanqanaba okumelana ne-$ 0.41, i-$ 0.48 kunye ne-$ 0.55.
Amanqanaba okuchasa: $ 0.41 $ 0.48, $ 0.55
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar yayinokuphazamiseka okuyingxenye kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.41 kwiveki ephelileyo. Ixabiso lalinyuka libhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.48 ngaphambi kokuba iibhere ziphazamise ukuhamba kwe-bullish. Ixabiso litshintshile isalathiso ukuya ngasezantsi kwaye lingena kwinqanaba lenkxaso ye-0.35 yeedola. Okunye ukuhla kwexabiso okulindelweyo.
Itshathi yemihla ngemihla ye-XLMUSD, ngoNovemba 17
Uxinzelelo lweebhere luyenyuka kwaye ixabiso liyehla ngokufanelekileyo ukuya emazantsi. Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ukuchithwa kwe-$ 0.35 kwinqanaba lenkxaso yeebhere kunokunciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 0.35 enokwandisa kwi-0.24 yenkxaso yezinga. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo ziphazamisa ukuhamba kwe-bearish, ngoko ke, ixabiso lingajongana namanqanaba okumelana ne-$ 0.41, i-$ 0.48 kunye ne-$ 0.55. Ixesha lesalathiso samandla ahambelanayo i-14 ikwinqanaba le-40 lokugoba phantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar ikwi-bearish movement kwi-chart yeeyure ze-4. Ingqekembe yayiphantsi kolawulo lweenkunzi kwiveki ephelileyo kwitshathi yeeyure ze-4. Iinkunzi zeenkomo zatyhala ixabiso ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 0.41 ngoNovemba 10 kodwa uxinzelelo lweebhere phezu kwamandla iinkunzi; le meko ikhokelele ekwenziweni kwe pin bar eguqulweyo. Yiloo nto eyabangela ukunyakaza kwe-bearish. Ixabiso lichitha inqanaba lenkxaso ye-0.35 yeedola namhlanje kwaye ngoku ibuyisela umva.
Itshathi ye-XLMUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 17
Nangona kunjalo, i-Stellar ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ekunxibelelaneni okusondeleyo okubonisa uxinzelelo lokuthengisa. I-Relative Strength Index amaxesha i-14 ikwimigangatho ye-40 kunye nomgca wesignali okhomba phantsi obonisa uphawu lokuthengisa.
tags Marketing, Mraketing, Uhlalutyo Technical, XLMUSD
I-Stellar (i-XLM / USD) Ixabiso elilindele ukuphulwa kweBullish kwiNqanaba le-0.42 yeedola
STELLAR Uhlalutyo lweXabiso - Novemba 11
Ukuqhawulwa kwe-$ 0.42 inqanaba lokumelana neenkunzi zenkomo kunokunyusa intengo kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.48 enokwandisa kwi-0.55 yezinga lokumelana.
I-Stellar is bullish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar yawela inqanaba langaphambili lokumelana ne-$ 0.35 ngo-Oktobha 13 kwaye ixabiso liphakathi kwe-$ 0.42 kunye ne-$ 0.35 iintsuku ezininzi ngenxa ye-bullish ephantsi kunye ne-bearish momentum. Ngomhla we-09 kaNovemba, iinkunzi zeenkomo zafumana uxinzelelo olungakumbi kwaye ixabiso lonyuswa kwinqanaba le-$ 0.42. Le ntsasa, abathengisi bavula imarike kwaye ixabiso linokuthi libuyisele umva ngaphambi kokuqhubeka kwentshukumo ye-bullish.
Itshathi yemihla ngemihla ye-XLMUSD, ngoNovemba 10
Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo luyenyuka kwaye ixabiso linyuka ngokufanelekileyo ukuya emantla. Ixabiso lirhweba ngaphezu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ukuqhawulwa kwe-$ 0.42 inqanaba lokumelana neenkunzi zenkomo kunokunyusa intengo kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.48 enokwandisa kwi-0.55 yezinga lokumelana. Nangona kunjalo ixesha lesalathiso samandla e-14 likwinqanaba lama-60 lokugoba ukubonisa uphawu lokuthengisa olunokuba lutsalo.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ze-4. Ukuphazamiseka kweebhere ngeenkunzi zeenkomo ngo-Oktobha 28 kubeka ixabiso kwintshukumo ye-bullish. Ngaphambi kokuphazamiseka kweenkunzi zenkomo, ixabiso lalidibanisa iintsuku ezimbalwa emva kokuba livavanye izinga lokumelana ne-$ 0.42. Irhole umva ukuvavanya kwakhona inqanaba lenkxaso ye-0.35 yeedola kunye namava okuqhambuka kobuxoki. Ixabiso liyanda ukuya kwinqanaba lokumelana ne-$ 0.42 kwinqanaba okwangoku. Kwimeko yokumelana nenqanaba le-$ 0.42 yezinga libamba, ixabiso linokutsala umva kwaye lijongene nenqanaba lenkxaso ye-$ 0.35, i-$ 0.30 kunye ne-$ 0.24.
Itshathi ye-XLMUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 10
Nangona kunjalo, i-Stellar ithengisa ngaphezu kwexesha le-9 le-EMA kunye ne-21 yamaxesha e-EMA kunye ne-Relative Strength Index amaxesha i-14 ikwinqanaba le-70 kunye nomgca wesignali okhomba phantsi obonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar (XLM/USD) Ixabiso linokuthi liphinde livavanye kwangaphambili liphantsi kwi-$ 0.24
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Okthobha 27
Ixabiso le-Stellar linokuthi lihlaziye inqanaba lenkxaso ephantsi yangaphambili kwi-$ 0.24 inikezele ukuba iphule inqanaba lenkxaso ye-$ 0.30 kwinqanaba, linganciphisa ngakumbi ngaphantsi kwe-$ 0.24 yezinga. Ixesha lesalathiso samandla anxulumeneyo 14 lingaphantsi kwenqanaba le-50 lokugoba ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar ifumene inkxaso kwi-$ 0.2446 ngoSeptemba 28. Ikhandlela le-bullish engulfing elenziwe kwinqanaba kunye nokunyuka kwexabiso. Inqanaba langaphambili lokumelana ne-$ 0.30 lingene kwaye ukunyuka kwexabiso kwi-$ 0.35 kwinqanaba. Inqanaba elisanda kukhankanywa alikwazanga ukubamba ixabiso. Yaphulwa phezulu kwaye yavavanywa inqanaba lokumelana ne-$ 0.4268 ngo-Oktobha 16. Ikhuphe umva kwaye i-volatility ephantsi ibekwe; ixabiso liqala intshukumo yokuqinisa.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, Okthobha 27
Iibhere zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye ixabiso liphula amanqanaba okumelana namandla asezantsi. Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso le-Stellar linokuthi lihlaziye inqanaba lenkxaso ephantsi yangaphambili kwi-$ 0.24 inikezele ukuba iphule inqanaba lenkxaso ye-$ 0.30 kwinqanaba, linganciphisa ngakumbi ngaphantsi kwe-$ 0.24 yezinga. Ixesha lesalathiso samandla anxulumeneyo 14 lingaphantsi kwenqanaba le-50 lokugoba ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar ikwi-bearish movement kwi-chart yeeyure ze-4. Emva kokuqhekeka kwenqanaba langaphambili lokumelana ne-$ 0.35 kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, iiBulls zandisa uxinzelelo kunye nokunyuka kwexabiso lokuvavanya izinga lokumelana ne-$ 0.42. Irholile emva kwaye yaqalisa ukuhamba phakathi kwe-0.42 yeedola kunye ne-0.35 yeedola. Namhlanje, iibhere zifumana umfutho othe kratya kwaye zidiliza i-$0.35 ukuya kwinqanaba le-0.30 yeedola.
I-XLMUSD itshathi yeeyure ezi-4, Okthobha 27
I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye ne-21 yamaxesha e-EMA kunye ne-Relative Strength Index amaxesha i-14 ikwinqanaba le-20 kunye nomgca wesignali okhomba phantsi obonisa uphawu lokuthengisa.
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso lingaphula inqanaba lokumelana ne- $ 0.42
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Okthobha 20
Ixabiso leStellar linokufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kwaye linokuliqhekeza ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.48 kunye ne- $ 0.55 yenqanaba. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.42 liphethe, amaxabiso anokujongana nenqanaba lenkxaso kwi $ 0.35, $ ​​0.30 kunye ne- $ 0.24.
I-Stellar inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. I-Stellar ilandela umkhombandlela weveki ephelileyo. Kwaxelwa ukuba kuyashushu ukukhwela kwi-bullish njengoko yayihlanganisa kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35. Inqanaba elikhankanyiweyo ligqitywe ziinkunzi kwiveki ephelileyo. Ingqekembe ingqokelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 okwangoku.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, Okthobha 20
Amanqanaba okumelana namandla angene ngaphakathi kwiStellar. Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA. Ixabiso leStellar linokufikelela kwinqanaba le- $ 0.42 lokumelana kwaye linokuliqhekeza ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.48 kunye ne- $ 0.55 yenqanaba. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 0.42 liphethe, amaxabiso anokujongana nenqanaba lenkxaso kwi $ 0.35, $ ​​0.30 kunye ne- $ 0.24. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 likumanqanaba angama-60 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Iinkunzi zonyuse uxinzelelo lwazo kwiveki ephelileyo kwaye zaqhekeza inqanaba lokuqala lokumelana ne- $ 0.35, ukunyuka kwamaxabiso kunye nokuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Ibuyile yabuya kwakhona inqanaba lenkxaso yenqanaba le- $ 0.35. Ukunyuka kwamaxabiso okujoliswe kwimarike yeXLM.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, Okthobha 10
I-Stellar ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kunye namaXesha amaNqanaba aMandla aHlanganisiweyo ama-14 akumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso liyafudumeza iBullish Ride Ngaphezulu kwenqanaba le- $ 0.35
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Okthobha 13
Ixabiso leStellar linokuqhekeza inqanaba lokumelana ne-0.35 yeedola ukuba iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, zingonyuka ziye kwi-0.48 yeedola ngaphandle kokuba iinkunzi ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 0.42.
I-Stellar inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. I-crypto ishushu ngokukhwela kwi-bullish njengoko idibanisa kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35 ukusukela kwiveki ephelileyo. Inqanaba elikhankanyiweyo lixhathise ukuphuma kwiveki ephelileyo. Kwangokunjalo, inqanaba lenkxaso le- $ 0.30 libambe kwaye iibhere azinakungena kuyo. Ukuqhawulwa kwe-bullish kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35 elindelweyo.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, Okthobha 13
I-Stellar ingene kumanqanaba okumelana nokuchasana phezulu. I-Stellar ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso leStellar linokuqhekeza inqanaba lokumelana ne-0.35 yeedola ukuba iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, zingonyuka ziye kwi-0.48 yeedola ngaphandle kokuba iinkunzi ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Kwimeko apho abathengisi bekhusela inqanaba lokumelana ne- $ 0.35, amaxabiso anokuqhubeka nokudibanisa okanye aqalise ukunyakaza kwe-bearish ukuya kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.30, $ 0.24, kunye ne- $ 0.19.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Iinkunzi zigcina isikhundla sazo kwimarike yeenkwenkwezi kwitshathi yeeyure ezi-4. Nangona, kwakungekho ntshukumo ibalulekileyo kwintengiso ye-stellar kwiveki ephelileyo. Kubonakala ngathi umfutho wabathengi ulingana nomfutho wabathengisi kunye nexabiso lokuzibandakanya ngokudibeneyo kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35.
I-XLMUSD itshathi yeeyure ezi-4, Okthobha 13
I-Stellar ithengisa ngokujikeleza amaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kunye namaXesha amaNqanaba aMandla aHlanganisiweyo ama-14 akumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga olunokukhokelela kuqhawulo.
I-Stellar (XLM / USD) Ixabiso libuyela umva njenge- $ 0.24 yeNqanaba leNkxaso
YINKONZO Uhlalutyo lwamaxabiso-Okthobha 06
Ixabiso leStellar linokunyuka liye kuma- $ 0.35 amanqanaba kwaye linokungena kwinqanaba lize liye kufikelela kwi-0.48 yeedola ngaphandle kokuba iinkunzi zeenkomo ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Kwimeko apho abathengi bakhusela inqanaba lokumelana ne- $ 0.35, amaxabiso anokuqhubeka nentshukumo yayo ye-bearish ukuya kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.30, $ 0.24, kunye ne- $ 0.19.
I-Stellar inyusa kwitshathi yemihla ngemihla. I-crypto ibiphantsi kolawulo lweebhere kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Abathengisi bakwazile ukuhlahla amaxabiso asezantsi kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.24. Iinkunzi zaphazamisa iibhere kwinqanaba le-0.24 yeedola. Iinkunzi zilinyusele phezulu ixabiso ukufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.30. Inqanaba elikhankanyiweyo laphulwe phezulu kwaye ixabiso lijolise kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.35.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, Okthobha 06
I-Stellar ingene kwinqanaba lokuxhasa elinamandla. I-Stellar ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso leStellar linokunyuka liye kuma- $ 0.35 amanqanaba kwaye linokungena kwinqanaba lize liye kufikelela kwi-0.48 yeedola ngaphandle kokuba iinkunzi zeenkomo ziyakwazi ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 0.42. Kwimeko apho abathengi bakhusela inqanaba lokumelana ne- $ 0.35, amaxabiso anokuqhubeka nentshukumo yayo ye-bearish ukuya kumanqanaba enkxaso ye- $ 0.30, $ 0.24, kunye ne- $ 0.19.
I-Stellar ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Umfutho wabathengisi uphelelwe ngamandla kwinqanaba lenkxaso le- $ 0.24 ngoSeptemba 28. Isenzo sexabiso senze i "w" yetshathi ebonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zikulungele ukuthatha intengiso. Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi kunokutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba leedola le-0.35.
I-XLMUSD 4 itshathi yeeyure, Okthobha 06
I-Stellar ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Nangona kunjalo, amaxesha ama-Index aMandla aNxulumene naMandla akumanqanaba angama-14 kwaye umgca womqondiso ukhombe ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa olunokubuyela umva.